जसपा अब कता ?
दुई धारमा बाडिएको जनता समाजवार्दी पार्टी सर्वोच्चको फैसला पछि पनि अलग अलग बाटोमा जाने भएको छ। फैसलापछि जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएको छ, महन्थ ठाकुर पक्ष भने विपक्षमा जाने भएको छ।...
फुटको संघारमा जसपा र लोसपा
मधेसवादी दल पन विभाजन उन्मुखमा देखिएका छन् । विभिन्न ६ पटी मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टीको घोषणा भएको थियो । राजपा र संघीय समाजवादी पार्टी एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भएको थियो । तर एक वर्ष नपाद जसपा विभाजन भयो । जसमा विभाजन भएर गठन भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जसपा पनि फुटको संघारमा पुगेका छन् । अहिलेको जसपा र लोसपामा बिबाद चर्किँदै गर्दा सी दुवै दल औपचारिक रूपमै विभाजन हुँदै छन् । राजधानी दैनिकमा सुभाष साहले खबर लेखेका छन् ।
Lokaantar पौष २०७८
जसपा पनि टुक्रियो
काठमाडौं, भदौ १० । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट अलग भएका १४ जना सांसद र कार्यकारिणी समितिका १६ सदस्यले बुधबार दिउँसो निर्वाचन आयोगसमक्ष हस्ताक्षर सनाखत गरेपछि आयोगले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लाई दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगले लोसपा दर्ता गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिए। लोसपा दर्ता भएसँगै जसपा औपचारिक […]
महाभारतको कथा सुनाउँदै रेशम चौधरीले भने : मेरो पक्ष पनि जसपा विपक्ष पनि जसपा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकता विवादबारे आफ्नो सनाखत दिन निर्वाचन आयोग पुगेका रेशम चौधरी तटस्थ बस्ने भएका छन्। उनले आफ्नो पक्ष भने पनि जसपा र विपक्ष भने पनि जसपा भएको बताए।...
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता विवादबारे आफ्नो सनाखत दिन निर्वाचन आयोग पुगेका रेशम चौधरी तटस्थ बस्ने भएका छन्। उनले आफ्नो पक्ष भने पनि जसपा र विपक्ष भने पनि जसपा भएको...
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजन निश्चित भएस“गै अगामी रणनीति तय गर्न शीर्षनेता आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पार्टी एकता नगरी छु्टिने निष्कर्षमा पुगेपछि निर्वाचन आयोगले यसबारे फैसला भोलि सोमबार गर्दैछ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि […] The post जसपा विवाद आधिकारिक को ? appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
राजधानी दैनिक आषाढ २०७८
जसपा विवाद हेर्दाहेर्दैमा
काठमाडौं, साउन ४ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षबीच आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगको इजलासले बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने भएको छ। जसपा आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सुनुवाइ गर्न आयोगले गठन गरेको इजलासले आइतबार सुनुवाइ सुरु गर्दै हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो। आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादसम्बन्धी मुद्दामा आइतबारदेखि सुनुवाइ सुरु गरी […]
Reporters Nepal आषाढ २०७८
काठमाडौं, असार ३० । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ । जसपा कार्यकारी समितिको मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बालकुमारीमा बसेको बैठकले सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो । जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय यादवले निर्वाचन आयोगमा पार्टी आधिकारिकताको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले जसपा तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताए । कांग्रेस […]
Reporters Nepal जेष्ठ २०७८
जसपा विवाद अब इजलासमा
काठमाडौं, असार २३ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्ष र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले आफूहरूलाई अलगअलग गरिदिन निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन्। जसपा आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्न मंगलबार आयोगले गरेको छलफलमा दुवै पक्षले मिल्ने सम्भावना नरहेको भन्दै अलग गरिदिन माग गरेका हुन्। दुवै पक्षले एउटै पार्टीमा रहन नसक्ने बताएपछि अब जसपा […]
जसपा पनि सरकारमा !
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूह सरकारमा सहभागी हुने भएको हो । यसअघि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओली, जसपा अध्यक्ष ठाकुर वरिष्ठ नेता महतोबीच सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल भएको छ । जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल भए पनि निर्णय केही निर्णय भएको छैन ।‘सरकारम
फुट सँघारमा जसपा
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट सँघारमा पुगेको छ । दुई ध्रवमा विभाजित जसपा नेता एकअर्काको निर्णय मान्न तयार नहुँदा पार्टी फुटनजिक पुगेको हो । हालै लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गरेपछि ‘प्रदेशमा मन्त्री भएकालाई कारबाही गरिएको’ जसपाले जनाएको छ । तर, पुनः अर्को पत्रमा ‘कसैलाई पनि कारबाही नगरिएको’ उल्लेख छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बिहीबार पत्रमार्फत ‘कोही कसैलाई कारबाही नगरिएको’ जनाएका छन् । तर, जसपा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले ‘पार्टी निर्णय नै नभ...